Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Entsha Guyana ukuya Barbados iinqwelo moya kwi-InterCaribbean
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba eziziiGuyana • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-InterCaribbean ilindele ukudibanisa iGeorgetown kwiindawo zeCaribbean ezongezelelweyo kwixesha elizayo elikufutshane ukuhambisa kwiCaribbean eqhagamshelene ngokwenene kunye ne-InterCaribbean Airways.
I-InterCaribbean Airways ibhengeze iinkonzo ezivela eGeorgetown (GEO), eGuyana ukuya eBarbados (BGI), kunye neenqwelomoya ezidibanisayo ukuya eSt Vincent kunye neGrenadines (SVD), Antigua (ANU), Grenada (GND), Dominica (DOM), naseSt Lucia (SLU) ).
Ukuhamba ngenqwelomoya nge Barbados ukuya eAntigua, iya kuqhubeka Providenciales kwaye uqhagamshele phambili ukuya Havana, Cuba.
Ngezi ndlela zintsha kunye neenqwelomoya ezinexesha elifanelekileyo eziqhagamshela kwiinqwelomoya eziya e-United Kingdom, e-USA, naseKhanada, sijonge phambili ekwamkeleni abathengi abavela kwihlabathi liphela.
I-InterCaribbean ilindele ukudibanisa iGeorgetown kwiindawo ezongezelelweyo zeCaribbean kwikamva elikufutshane kakhulu ukunikezela ngeCaribbean eqhagamshelwe ngokwenene I-InterCaribbean Airways.
Iinqwelomoya zicwangciselwe ukuqalisa ukusebenza nge-17 kaDisemba, 2021 ngexesha leholide kunye neenqwelomoya ezili-12 ngeveki ezicwangciselwe ukusebenza phakathi kweGeorgetown kunye Barbados.
UMphathiswa weMisebenzi yoLuntu, uJuan A. Edghill wamkele inqwelomoya kwimarike yaseGuyana kumsitho owawubanjwe eDukes Lodge eGeorgetown ngoNovemba 5, 2021. Umphathiswa u-Edghill uthe akukho nxibelelwano lwaneleyo phakathi kweGuyana kunye neCaribbean iphela, kunye neGuyana. urhulumente ke ngoko ukholisiwe yinkampani yeenqwelomoya eyongezelelweyo ejoyina isibhakabhaka esinobuhlobo.
Ekwazisa ngenkonzo kumsitho wokuphehlelelwa eGeorgetown obuzinyaswe ngabaPhathiswa, ooDiplomathi abazinze eGuyana, kunye namalungu osomashishini. Ngokutsho kukaMnu. Gardiner, "Ngemigudu evulekileyo yoshishino lwalo rhulumente, sakwazi ukubeka yonke into, kwaye silapha ukuze senze isibhengezo, kwaye senze inkonzo ibe yinyani ukususela ngoDisemba 17."